Ubuntu Web 20.04.3 Ukuphucula i-Indri iveki ifika kunye / e / kwi-Waydroid | Ubunlog
IPablinux | 16/10/2021 11:01 | Ulwabiwo olusekwe kubuntu, Ubuntu
Kule veki, iCanonical iphehlelele usapho Phelisa i-Indri (21.10). Ngaphambi, emva okanye ngexesha elinye kunye neencasa ezisemthethweni, ezo zingafakwanga ngokusemthethweni zikhutshiwe, ezinje ngeCinnamon kunye noManyano, kodwa kukho iprojekthi eyahlukileyo eqhubekayo kunaleyo bendilindele ukuba ndiyazise eyayo 21.10 . Into yile, le flavour ayihambisi ukukhutshwa komjikelo oqhelekileyo, endaweni yoko iyakha kwiFocal Fossa, i-LTS yamva nje. Ke, kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo Usungule Ubuntu Web 20.04.3, kwaye ize nentsingiselo ebalulekileyo.
Le "Web" yenzelwe ukuba ibe yenye indlela kwiGoogle Chrome OS. Nangona inkqubo yokusebenza kwesikhangeli sedesktop ayikho kwinqanaba elifanayo ne-100% ye-Linux, inika amathuba, njengokukwazi ukuqhuba usetyenziso lwe-Android. Yile nto ithenjiswa ngu-Ubuntu Web 20.04.3, ukusukela oko I-Waydroid ifakiwe.
Ubuntu Web 20.04.3 iphucula inkxaso kwii-Android zokusebenza
Le nguqulo ibandakanya '/ e / en WayDroid'. I-WayDroid yindlela entsha eyaziwayo kwi-Anbox kwaye siyifakile / e / 10 kuyo, kunye nokwenza isixhobo sokuyilawula. Ke, ukongeza kwii-PWAs ezivela kwi- / e / webstore, ngoku ungasebenzisa ukusebenza kwendalo kwe-Android o / e / ii -apps (ngokungafaniyo ne-Anbox) kwi / e / Ivenkile nakwi-Ubuntu Web. Emva kokufaka i-ISO, kuya kufuneka usungule isicelo '/ e / en WayDroid' kwisiqalisi kwaye ulandele amanyathelo. Uya kudinga umatshini wokwenyani (hayi umatshini obonakalayo) ukuze i-WayDroid isebenze.
Kubalulekile eyokugqibela: ayizukusebenza kumatshini obonakalayo.
Nangona i-Anbox ibikade ikhula kangangexesha elithile, ayisebenzi kwaye kufanelekile kulo naluphi na usasazo lweLinux. I-Waydroid ijolise ekuphuculeni izinto, kwaye kulindeleke ukuba kungekudala yonke into iya kuba lula. Ukuba ayigqibi ukuba, Ubuntu Web 20.04.3 ukuya phambili kuya kusivumela sebenzisa ii -apps ze-Android emva kokufakwa kwe-zero, kwaye uthathele ingqalelo ukuba ungasifaka isoftware, inokuba ukhetho olufanelekileyo njengenkqubo ephambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Ubuntu Web 20.04.3 Ukuphucula i-Indri iveki ifika kunye / e / kwi-Waydroid